पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, पाउनुहुन्छ यस्तो चामत्कारिक फाइदा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, पाउनुहुन्छ यस्तो चामत्कारिक फाइदा
चैत ३० गते, २०७५ - १३:०६
काठमाडौं । नुहाउने पानीमा नून हाल्दा अनेकौं रोग भाग्छन् । यसले संक्रमणहरूलाई पनि निको पार्छ । ज्वरो आउँदा तपाईं सीधे नून मनतातो पानीमा हालेर नुहाउनुस् । एक बाल्टिन मनतातो पानीमा दुई चम्चा नून, एक चम्चा नरिवल तेल मिसाएर नुहाउनका लागि त्यो पानी प्रयोग गर्नुस् । यसरी नुहाउँदा रुघा र ज्वरो ठीक हुन सहायता पुग्छ ।
नियमित रूपमा नूनपानीले नुहाउँदा दाग र चाउरी घट्छन् । छाला नरम हुन्छ र छालाको नमी सन्तुलित रहन्छ ।
चैत ३० गते, २०७५ - १३:०६ मा प्रकाशित
वेश्या पुरुषको दर्दनाक कथा यस्ताे !
जान्नुहोस् ! नियमित सेक्स गर्नु पर्ने ८ कारणहरु